အမေးအဖြေများ - Qingdao Renergy ပစ္စည်း Co. , Ltd မှ
အဆိုပါလေသည်ဓါးသွားပတ်ပတ်လည်လှည့်; ဒီမီးစက်ချိတ်ဆက်သောရိုးတံ, spins ။ တစ်ဦးကမီးစက်စက်မှုစွမ်းအင်ကနေလျှပ်စစ်စွမ်းအင်ကိုထုတ်လုပ်ပေးသည်။
ဒါဟာသင့်ရဲ့စွမ်းအင်ကိုဝယ်လိုအားပေါ်တွင်မူတည်သည်။ တစ်နေ့လျှင်သင့်ရဲ့ max ကိုလျှပ်စစ်သုံးစွဲမှုတွက်ချက်ပေးပါ။ ပျမ်းမျှအားတွင်, ပုံမှန်အမေရိကန်အိမ်ပြန် 5kw သို့မဟုတ် 10kw တာဘိုင်သေးနဲ့တာဘိုင်လိုအပ်ပေလိမ့်မည်။
ပျမ်းမျှ payback ကာလကဘာလဲ?
အဆိုပါ payback ကာလ၏အရှည်သည်တာဘိုင်ပေါ်တွင်တပ်ဆင် site ကို, ရေပန်းစားလျှပ်စစ်မီးနှုန်းထားများနှင့်ရရှိနိုင်ပါငွေကြေးနှင့်မက်လုံးပေးမှာလေတိုက်၏အရည်အသွေးမူတည်ပါသည်။ ဤအများနှင့်အခြားအချက်များအပေါ် မူတည်. ကအပြည့်အဝသေးငယ်တဲ့လေတိုက်တာဘိုင်၏ကုန်ကျစရိတ်ကိုပြန်လည်ဖေါ်ထုတ်ရန်ကြာအချိန်ကို6မှ 30 နှစ်အထိကနေဘယ်နေရာမှာမဆိုယူနိုင်ပါတယ်။
လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်စစ်ဆေးခြင်းတစ်ချိန်ကတာဘိုင်ရဲ့ 20 + ငါးနှစ်သက်တမ်းအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှနှစ်အနည်းငယ်ဖျော်ဖြေနေကြသည်။ အချို့သောတာဘိုင်တစ်ခုအိမ်မှာကွန်ပျူတာကနေအဝေးကနေစောင့်ကြည့်နိုင်ပါတယ်သော်လည်းတစ်ဦးကပရော်ဖက်ရှင်နယ် installer ကိုသို့မဟုတ်လေ့ကျင့်သင်ကြားနည်းပညာရှင် (ထိုတာဘိုင်ရောင်းသောများသောအားဖြင့်ထုတ်လုပ်သူသို့မဟုတ်ကုန်သည်), ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစစ်ဆေးခြင်းမှတဆင့်တာဘိုင်နှင့်မျှော်စင်ထိန်းသိမ်းထားသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏အသေးစားလေစွမ်းအင်တာဘိုင်ဂီယာ box ကိုဆူညံသံကိုရှောင်ရှားဖို့နဲ့ထိရောက်မှုတိုးမြှင့်ဖို့တိုက်ရိုက် drive ကိုစနစ်များရှိခြင်းအားဖြင့်ဥပမာအားဖြင့်အလွန်တိတ်ဆိတ်ဖြစ်ဖို့ဒီဇိုင်းပါပြီ။ ယေဘုယျအားဖြင့်လေတိုက်သူ့ဟာသူနေတဲ့လေတိုက်တာဘိုင်ထက်ပိုပြီးဆူညံသံစေသည်။ ဒါဟာအသေးစားလေစွမ်းအင်တာဘိုင်ကနေမဆိုဆူညံသံ 30 ကျော်မီတာမှာကိုကြားလိမ့်မည်ဟုအများဆုံးမဖြစ်နိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါဆူညံသံလယ်ပြင်ပတ်ပတ်လည် 40-50 dB (က) ၌တည်ရှိ၏။
7.What ကြင်နာအထောက်အကူသင်တို့အပေါ်မှာ-site ကိုတပ်ဆင်ပေးနိုင်သလဲ
installation ကိုမပြုမီ, ငါတို့ရှိသမျှသည်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာကို manual ပေးပါလိမ့်မယ်။ ဤအတောအတွင်းကျနော်တို့က installation ကိုကြီးကြပ်ကွပ်ကဲဖို့အတွက်နည်းပညာရှင်ပေးပို့နိုင်ပါတယ်။
သင်ရုံလျှပ်စစ်နှုန်းထားများလျှော့ချဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်လျှင်, သငျသညျဇယားကွက် system ပေါ်တွင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်ပါ။
သူတို့ကို မှလွဲ. ကျနော်တို့ကွဲပြားခြားနားသောအခြေအနေများအညီအသေးစားဇယားကွက် / တယ်လီဘူတာရုံနှင့်လေနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးဟိုက်ဘရစ်စနစ်ကပေးနိုင်ပါသည်။
9.Maybe ကိုယ့်ဓါး, အင်ဗာတာ, နှင့်ရဲတိုက်ကဲ့သို့အချို့သောအစိတ်အပိုင်းများကိုဝယ်ယူရန်နိုင်မလဲ?
ဟုတ်ကဲ့, သင်လုပ်နိုင်သည်။ မဆိုဆက်စပ်စီမံကိန်းကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူကြိုဆိုဝေစု။
ထုတ်လုပ်မှု မှလွဲ. တခြားအဘယ်သို့ပြုနိုင်သနည်း
ကျနော်တို့ဒီဇိုင်း, analysis တွက်ချက်မှု, installation နဲ့ဝန်ဆောင်မှုများအတွက်တာဝန်ရှိနိုင်ပါတယ်။